Tsvangirai eyeing electoral return 9 years ago ago
JOHANNESBURG, South Africa, May 10 (UPI) -- Opposition leader Morgan Tsvangirai said Saturday he plans to return to Zimbabwe to take part in a presidential runoff election.
Mbeki meets with Mugabe in Harare 9 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, May 9 (UPI) -- South African President Thabo Mbeki spent about four hours in talks Friday with President Robert Mugabe of Zimbabwe.
Militias 'part' of police in Zimbabwe vote 9 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, May 9 (UPI) -- Militias indicated they plan to intimidate voters by posing as police officers during a presidential election runoff in Zimbabwe, police said.
Bush tells Mugabe to end violence 9 years ago ago
WASHINGTON, May 8 (UPI) -- The will of Zimbabwean voters must be respected and violence in that country must end, a spokesman for U.S. President George Bush said Thursday.
Zimbabwe election run-off may be year away 9 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, May 8 (UPI) -- The atmosphere in Zimbabwe is too violent to conduct a presidential runoff election soon, an independent observer said.
Report: Eight conflicts deteriorate 9 years ago ago
BRUSSELS, May 5 (UPI) -- The International Crisis Group says in its CrisisWatch monthly report that eight conflict situations around the world deteriorated during the month of April.
Teachers in Zimbabwe may strike 9 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, May 5 (UPI) -- The Progressive Teachers Union in Zimbabwe said Sunday its members will strike if government attacks on them continue.
MDC rejects runoff for now 9 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, May 3 (UPI) -- The Zimbabwean opposition lobbied African leaders Saturday, demanding a better count of votes in the presidential race.
Zimbabwean officials say runoff needed 9 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, May 2 (UPI) -- Zimbabwean election officials said Friday a runoff is needed between presidential candidates Morgan Tsvangiari and incumbent Robert Mugabe.
MDC members released, but violence looms 9 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, April 30 (UPI) -- A former U.S. ambassador to Zimbabwe hailed a decision by the ruling ZANU-PF party to release opposition members from custody but warned of further crackdowns.
U.N. warns of hostility in Zimbabwe 9 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, April 29 (UPI) -- A top U.N. official is raising concerns about the growing hostility and the alarming threats of political violence in the wake of Zimbabwe's recent elections.
Bush calls on Mugabe to honor vote 9 years ago ago
WASHINGTON, April 29 (UPI) -- U.S. President George Bush Tuesday said Zimbabwe President Robert Mugabe should respect the results of that country's recent election.
Video alleges torture by ZANU-PF 9 years ago ago
HARARE, Zimbabwe, April 29 (UPI) -- London's Sky News Tuesday revealed video showing Zimbabwean opposition supporters bearing signs of torture allegedly done by backers of the ruling party.
Intervention urged in Zimbabwean crisis 9 years ago ago
UNITED NATIONS, April 28 (UPI) -- Regional powers have an obligation to intervene in the Zimbabwe election dispute to avert a humanitarian crisis, officials say.
First Prev Page 25 of 44 Last Next